जीवनकालमा एकपटक मात्रै देख्न सकिने ऐतिहासिक दुर्लभ सूर्य ग्रहण, कुन राशिले हेर्न मिल्छ ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
दुर्लभ ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण दुई नक्षत्रमा लाग्दै विश्वमा नै सकारात्मक परिवर्तनको संकेत ।।
पृथ्वीले आफ्नो अरविटमा नित्य रुपमा सूर्यकाे परिक्रमा गरिरहेकाे छ । त्यस्तै सूर्यले पूरा सौर्य परिवारकै परिक्रमा गरिरहेको छ । चन्द्रमाले पनि पृथ्वीको चारैतिर परिक्रका गरिरहेको छ । पृथ्वीमा भएका मानिसले चन्द्रमाको करिब आधाभाग लगभग ५४ प्रतिशत मात्रै अर्थात चन्द्रमाको एकापट्टिको भाग मात्रै देखिरका हुन्छौं ।
र यो पनि : पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? लगाउनुस् घरमा चुम्बकले जसरी पैसा तान्ने क्रासुला मनी ट्री
परिक्रमाकै क्रममा जब चन्द्रमा सूर्य र पृथ्वीको मध्यभागमा आउँदछ या एउटै लाईनमा पर्दछ यस्तो अवस्था लाई न्यूमुन अर्थात् अमावस्य भनिन्छ । यस्तो अबस्थामा चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाशलाई पूर्णरूपमा पृथ्वीमा आउन अवरोध गर्दछ र राहु तथा केतुकाे पनि पूर्ण छाया परेकाे अवस्थामा पृथ्वीको जुन भागबाट उक्त सूर्यको प्रकाश देख्न पाईदैन त्यही स्थानलाई नै ग्रहण लागेको भनेर भनिएको हो ।
यहीँ ग्रहण अन्य देशबाट फरक तरिकाले पनि देख्न सकिन्छ ।
यसको ठिक बिपरित चन्द्रमा अपोजिट साईटमा गएको अबस्था रेखिय अबस्था बन्दछ । पृथ्वीको विपरीत तर्फ हुँदा पूर्णिमा हुन्छ यस्तो अबस्थामा सूर्यको किरण पूर्णरुपमा चन्द्रमामा ठोकिएर पृथ्वीमा आउँदछ ।
यदि यस्तो अबस्थामा राहु या केतु ग्रहमध्ये कुनै एक नजिक गएको अवस्थामा या चन्द्रमाको प्रकाश छेकेमा चन्द्र ग्रहण लाग्दछ ।
सामान्यतया चन्द्रमाकाे छाया पृथ्वीमा पर्दा सूर्यग्रहण तथा पृथ्वीकाे छाया चन्द्रमामा पर्दा चन्द्र ग्रहण लाग्दछ ।
र यो पनि : कोरोना महामारीको बारेमा ४०० वर्ष अघि नै गरिएको थियो भविष्यवाणी
ग्रहण कालमा कुनै नदी, तलाउ तथा धार्मिक क्षेत्रमा गएर स्नान गर्नु पर्ने बिधान रहेको छ । साधना गर्ने मानिसका लागि यस्तो दिन अति उपयोगि मानिन्छ ।
दान तथा मन्त्र हरुको जपले यसको प्रभाव कमपर्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । याे ग्रहणमा शिव तथा कालीकाे साधना बहु उपयोगी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ताे समयमा गरिएको शुभ कर्महरु अन्य समयमा गरिएको भन्दा १०८ गुणाले बढिहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, असार २६ २०७७ १७:५५:५८